Maitiro ekudzivirira ako madudziro neiyo nyowani manyorerwo application | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira ako madudziro neiyo nyowani iOS 9.3 manotsi app
Apple yakaburitsa iOS 9.3 nezuro, yazvino vhezheni yeanoshanda system ye iPhone, iPod Touch uye iPad. Pakati pezvinhu zvakawanda zvinonakidza zvitsva zvinosanganisira iyi vhezheni nyowani, imwe ndeye yakavandudzwa manyorerwo ekushandisa. Kubva ikozvino zvichienda mberi tinogona kuchengetedza zvirevo zvedu ne password, izvo zvakare zvinotibvumidza isu kukiya / kuvhura ivo neTouch ID pane zvishandiso zvine chigunwe cheminwe. Kuchengetedza manotsi muIOS 9.3 haisi nzira yakaoma, asi zvinokwanisika kuti mumwe mushandisi haazive chaizvo kuti anozviita sei. Pano isu tichakudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive password chengetedza zvinyorwa mune yemuno Apple app.
Sei Password Dzivirirai iOS 9 Notes
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura iwo marongero uye nekuwana iyo Chikamu cheManotsi.
Pane imwe nguva mukati meChikamu cheMashoko, tinopinda Password.
Sezvauri kuona mune yapfuura skrini, muchikamu icho isu tinokwanisa kumisikidza iyo yekubata ID uye nekuwedzera password. Pasiwedhi yatinowedzera inogona kuva chero; yakasununguka zvachose neApple ID.
Kana pasiwedhi yawedzerwa, tinofanirwa kuchengetedza manotsi atinoda, saka isu tave kuenda kuchirongwa cheManotsi.
Isu tinopinda mutsamba yatinoda kuchengetedza.
Tinobaya pane bhatani rekugovana (
Sezvauri kuona mune iyo skrini, iyo sarudzo yekuvhara iyo noti inowanikwa. Takatamba pairi.
Chekupedzisira, tinofanirwa kuisa password yatakarongedza mudanho 3. Tichaona kuchangamuka uye ichave yatochengetedzwa
Padlock ichaonekwawo pamusoro. Kana yakavhurwa, haizodzivirirwe. Kana yakavharwa, hapana munhu anogona kuiona asina kuisa password kana zvigunwe zvedu.
ZVINOKOSHA: kukwanisa kuwana manotsi atakachengetedza ne password tinofanirwa kuzviita nawo shanduro dzekupedzisira dzeApple anoshanda masystem. Kana isu tiine iPhone ine iOS 9.3, isu tinochengetedza password uyezve tinoda kuiona pairi, semuenzaniso, jailbroken iPad, hatizokwanisa kuivhura, nekuti yazvino jailbreak yakawanikwa yakaburitsirwa iOS 9.1. Zvimwe chete neOS X: isu tichafanirwa kuve neOS X 10.11.4 yakaiswa paMac yedu kuti tikwanise kuona zvinyorwa.
Ndatsanangura zviri pamusoro, ndinofanira kutaura pane chimwe chinhu chandisina kufarira nezve ino sisitimu: hazvisi izvo zvinoita sekunge zvakashata, asi ndinofunga zvine kukanganisa, uye ndiko kuti hazvigoneke kugadzirisa kana kudzima a rakakiyiwa noti, kana zvirinani inofanirwa kunge iri sarudzo yacho. Chero zvazvingaitika, kugona kuchengetedza manotsi ne password chinhu chitsva chinonakidza chakarasika mune zvimwe zvinoshandiswa. Wakambozviedza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira ako madudziro neiyo nyowani iOS 9.3 manotsi app
Inouraya inoitwa. Chavaifanirwa kunge vakaita ndechekuti kuti uwane iyo MAZIVISO App yakavhurwa ne password kana neTouch ID (izvi kutanga nazvo), chechipiri kuti mukati meAPP mumwe anogona zvakare kuita zvavakapinda (isa izvo zvaunoda ne kukiya).
Asi izvi kuwana manotsi sezvazvaive kusvika nazvino ... Zvakanaka, chii chisina maturo,? CHANDINODA KUTI HAPANA ANOGONA KUVHURA APP ANOTEVERA vanamambure veApple.
Muchokwadi hapana nhau, iyi nhanho ini ndiri kuenda kuApple.
Zvakanaka, zvinoita sezvakanaka kwandiri, uyo asina chikwereti, haatyi chinhu, zviri pachena kuti pane zvinyorwa zvakavanzika, fomu racho rinoratidzika kunge rakarurama.
Rombo rakanaka ne Android (kunyangwe ndichiziva kuti hazvigone).
Pablo Huerta akadaro
Zvakanaka chokwadi ndechekuti ini handisi kuronga kuvandudza izvozvi kana kuti gare gare, ivo vakakanda rakakura rekuvandudza zvisina maturo. Chikamu chakanakisa ndechekuti haina basa zvachose. Mazuva ese ini ndinoshandisa 1Password kuchengetedza zvinyorwa zvandinofunga kuti zvakafanirwa ipapo neyakagunzva Kubata ID yekudzivirira mukuwedzera kune chokwadi chekuti ini ndinogona kuwana mune imwecheteyo app zvese izvo iwe zvaunoziva kare kuti zvinogona kuitwa ne1Password, zvirokwazvo zvakanyanya kuzara kupfuura uku kuyedza Apple muzvinyorwa. Zvinoshamisa kuti aya marudzi ezvinhu ari kuitwa parizvino.
Pindura Pablo Huerta
Zvakanaka, iyo app ine id kuti ivhure inoita kunge inorwadza kwandiri ... zvirinani nenzira iyi ... chete iyo yauri kufarira kuvharira uye kwete iyo yese app pane system ...
Izvo zvakakosha here kutenga iyo iPhone 6s mushure mekumisikidzwa kweiyo iPhone SE?
Apple yatopa makesi eiyo iPhone SE ichisimbisa kuti inoenderana neiyo iPhone 5 / 5s